Rwendo rweNorway runoita marii? - ALinks
Paavhareji mutengo wezuva nezuva wekuenda kuNorway i111 US Dollars, kana $, uye zvekudya i30 US Dollars, kana $. Avhareji mutengo wehotera kune vakaroorana i115 $. Rwendo rwakanyatsorongedzerwa ruchakutorera 80$ pazuva. Rwendo rwepakati-renji runosungirwa kuita 170 $ pazuva. Rwendo rwepamusoro-soro ruchakubhadharisa 275 $.
Mari yekuNorway ndiyo Norwegian krone. 100 Norwegian kroner, kana kr, kana NOK, inosvika zviuru gumi nemazana matatu emadhora ekuAmerica. Ndiwo zvakare angangoita 10,3 Euros, kana mazana masere Indian rupees, kana makumi manomwe Chinese yuan.
Kuenda kuEurope kunoshamisa sezvo kondinendi ino inopa nyika dzakawanda dzakanaka. Norway ndiyo imwe nyika yakadaro yausingagoni kufuratira. Iyi nyika yeScandinavia iri kuchamhembe uye kumadokero kweEurope. Iri pakati peBaltic Sea & Arctic Ocean ine mamwe anofema kuona. Saka ngatitorei pfungwa yekuti rwendo rweNorway runoita marii.
Fjords, inlets, uye mabay pano ari kusungirirana. Iwe unogona kuona mhuka dzesango mumaruwa. Iwe unoona zvese zviri munzvimbo ino yepasi kubva kumaotter kusvika kune moose nemabheji. Norway inzvimbo yekuzorora yevanoda zvisikwa, vanoda tsika, uye vanyori venhoroondo. Nezvakawanda zvekupa iwe unogona kutogadzirira chiitiko chaicho uye ndangariro kuti ugare hupenyu hwese. Iwe unogona kutonanga kumakomo eTromso muArctic denderedzwa kana kuongorora maguta akaita seOslo.
Norway ine zvakawanda zvekupa nevanhu vari pano vachiyevedza uye kutaridzika kuri kunaka munyika. Asi nekudzokera shure kwekudhura uye nekudaro kunotadzisa vanhu kufamba pano.
Norway inodhura uye haisi nzvimbo yakarongwa yekushanyira. Paavhareji mutengo wezuva nezuva wekuenda kuNorway i1,072 kr (111 $) uye zvekudya i290 kr (30 $). Avhareji mutengo wekamuri yehotera yevaviri i1,110 kr (115 $). Rwendo rwakarongedzerwa bhajeti ruchakubhadhara 773 kr (80 $) pazuva. Zvichienderana nebhajeti rako, rwendo rwunofanira kuita pakati pe170 $ ne275 $ pazuva, kana pakati pe1600 kr ne2600 kr.
Nemazano anotevera ekuchengetedza ekufamba, unogona kuita kuti zvive nyore kufamba pasina kuisa gomba muhomwe dzako. Heano mashoma ekuchengetedza mari matipi ekufamba zvakachipa.
Zvigadzirire zvokudya zvako
Chikafu ndeimwe yemitengo yakakura muNorway. Kudya kunze zuva rega rega mumaresitorendi kana majoini echikafu nekukurumidza kana marori echikafu achadya bhajeti yako. Kuti uchengetedze mari gadzirira chikafu chako. Takura ndiro dzeNorway utenge kubva kugirosari uye bika chikafu chako. Kwete chete iwe unochengetedza mari iwe unogona kunge uine ruzivo rwakawanda rwekudya uye unowana kudya zvine hutano chikafu.
Iva nekadhi rekushanya
Kushanyira masaiti uye zvinokwezva, maguta eNorway anopa pasina kushandisa mari yakawanda. Unofanira kutenga kadhi rekushanya. Bergen & Oslo ndiwo maguta makuru munyika uye vanopa kadhi iri. Vanogona kukubatsira kuchengetedza mari yakawanda. Kadhi rekushanya rinopa zvifambiso zveveruzhinji zvemahara.
Usanonoke kuronga rwendo rwekuNorway pachine nguva. Kuchengetedzwa pamberi pemubhadharo wendege, masevhisi emota, & pekugara zvinogona kuchengetedza kusvika pa50%. Nzendo dzepamberi dzinokubatsira kuti uwane mahotera akanaka uye kubhuka kuri nyore.
Deredza zvinwiwa zvevanhu vakuru
Girazi redoro kana waini harizoise hombe muhomwe yako asi zvinwiwa zvinodhaka zvinokubhadharisa. Paavhareji ichaita 100 NOK pachinwiwa chimwe nechimwe. Nekuva nehusiku kunze mudhorobha uine zvakawanda zvekudyira-dyira iwe uchadurura mari pasi pemvura. Kusvetuka zvinwiwa kuchaita kuti musoro wako urambe wakajeka uye haufanirwe kupotsa nguva yekurara kubva pane hangover.
Enda parwendo neboka reshamwari, uye shamwari dzinokubatsira kuwana chiitiko chinoshamisa nevanhu vaunoda. Iwe unogona zvakare kuwana mukana wekutsemura mutengo wekurenda mota, mahotera, mahostela, nezvimwe.
Ndekupi kwekugara muNorway?
Kune akawanda enzvimbo dzakanaka dzekugara muNorway uye pazasi pane rondedzero yemasaiti anoshamisa uye nzvimbo dzekushanyira.
Iro rine vanhu vakawanda uye guta guru reNorway rinopa pekugara kwakasiyana. Pane zvinhu zvakawanda zvisingadaviriki zvekuita pano. Kuongorora mamiziyamu, nzendo dzekufamba, magadheni, uye rwendo rwechikepe zvinogona kuve chiitiko chakanaka. Basa rekuvaka rinofema uye hupenyu hwehusiku hunoshamisa.
Kushanya mafjords kunofanirwa kunge kuri chinhu chekutanga pane chako chekuita-rondedzero uye Bergen ndiyo nzvimbo iyoyo. Ndiro rimwe remaguta ane hunyanzvi muEurope yese ane mamwe anofema nzvimbo. Bergen ndiyo gedhi rekuenda kumafjords. Iwe unogona kuwana hukuru uye geological zvinoshamisa zvichiita kuti shaya yako idonhe.
Nzvimbo iri kuchamhembe kweEurope yose iSvalbard. Kunyangwe iyi iri nzvimbo iri kure inokupa iwe zvakawanda zvekuita. Iyo inzvimbo yepamusoro yekuona mhuka dzesango munzvimbo dzechisikigo uye ine maonero akanaka echando chechando. Sezvo Svalbard iri kuchamhembe-kure unowana maonero makuru emarambi ekuMaodzanyemba uye muzhizha zuva re24 hr.
Pakati peNorway iTrondheim ine zvivakwa zvine mukurumbira uye zvine mavara ane mavara. Nzvimbo yevanofamba netsoka inzvimbo yakanaka yekufamba-famba uye kusangana neveko uye vaunofamba navo. Kune Gothic Cathedral iwe unofanirwa kutarisa uye akawanda echisikigo masaiti uye Trondheim fjord.
Nemamwe matipi & kuronga, unogona kushanyira nzvimbo ino, usingakuvadze homwe dzako. Nevanhu vane hushamwari uye akawanda ezviitwa zvisingaperi, Norway ine zvakawanda zvekupa. Ndiyo nyika inodziya uye inogamuchirwa zvakanyanya muEurope yese.
Inodhura zvakadii Norway?
Chero ani anobva kunze kwenyika anoona Norway inodhura. Mazhinji acho akareba vhiki imwe kana maviri.
Kugara mu a hotera kana hostel yemunhu mumwe chete kr 530 pazuva.
Pekugara muhotera nzvimbo yevanhu vaviri iri kr 1,050 pazuva.
Chikafu chingangoita kr 275 pazuva.
Varaidzo inosvika kr 150 pazuva.
Zvinoita marii kubhururuka kuenda kuNorway?
Zvinoenderana nemazuva uye mwaka. Asi kuongorora Skyscanner ndakawana aya emitengo.
Kana iwe uri muEurope, unogona kushandisa kubva zvishoma se30 US Dollars kusvika 250 US Dollars.
Kana iwe uri kuNorth America, unogona kushandisa kubva pashoma se300 US Dollars kusvika 800 US Dollars.
Kana uri kuWest Africa, unogona kushandisa kubva pashoma se600 US Dollars kusvika 800 US Dollars.
Kana iwe uri kuEast Asia, unogona kushandisa kubva pashoma se500 US Dollars kusvika 700 US Dollars.
Kana iwe uri kuSouth Asia, unogona kushandisa kubva pashoma se600 US Dollars kusvika 900 US Dollars.
Ndeipi mari yekushanya kuNorway?
Kushanya kwakawanda kutenderera Norway kunodhura madhora zana nemakumi mashanu kusvika mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica pazuva. Izvo hazvisanganisire rwendo rwako rwekuNorway. Mazhinji acho akareba vhiki imwe kana maviri.
Iwe unogona kuona akawanda akanakisa eNorway nerwendo rwekushanya. Inzira yakanaka yekufambawo nevamwe vanhu. Iwe une nzendo dzinotarisa kumaguta, kumaruwa kana kumahombekombe egungwa. Kushanya kwevadiki kana vanhu vakuru. Kushanya kune zvakawanda nezvechiitiko chetsika kana humwe hupenyu hwehusiku.
Source: Budget Rwendo Rwako
Mufananidzo uri pabutiro uri kumwe kuGudvangen, Norway. Mufananidzo na redcharlie on Unsplash
Ndeipi nguva yakanakisa yekushanyira USA?
Ndeipi mutengo wekugara muDenmark? Mari yekufamba, imba uye chikafu muDenmark.
Zvakawanda Zvakawanda Zvakadii Kuti Mutengo Kufamba Mu UK? Tarisa!!
US Visa yeAfghanistan
Nzira yekuwana sei asylum muAruba?